हतास मुख्यमन्त्री ! | Hakahaki
काठमाडौं । प्रदेश सरकारले पर्याप्त बजेट र जनशक्ति नपाउँदा संघीय सरकारप्रति गुनासो गर्न थालेका छन् ।
संघीय सरकारले प्रदेश मातहतका कार्यालयहरूलाई ४ महिनासम्म पनि पर्याप्त कर्मचारी पठाउन सकेको छैन । साथै, नयाँ कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारलाई बजेट पनि करिब १ अर्ब मात्रै पठाएको छ ।
जनताका सपना पूरा गर्ने वाचासहित मुख्यमन्त्रीहरू निर्वाचित भए, प्रदेश सरकार गठन भएको छ । तर, स्थापनाको चार महिनामै प्रदेश सरकारबाट थाक्ने स्थितिमा पुगिसकेका आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । प्रदेश सरकारहरू बजेट कम भएको, कर्मचारी अभाव भएको र संघीय सरकारको असहयोगबाट पीडित भएको बताउन थालेका छन् ।
कर्मचारी अभावले कार्यक्रम अनुगमन तथा कार्यान्वयन जटिल भएको प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबहादुर राउतको गुनासो छ । उनले प्रदेशले नै करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको बताए । यस्तो समस्या अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पनि जानकारी गराए ।
तर, वैशाख महिनाभित्र प्रदेशमा कर्मचारी पुर्‍याइसक्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको दाबी छ । मन्त्री पण्डितका अनुसार कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमध्ये एक विकल्प रोज्न लगाएको र उनीहरूकै रोजाइका आधारमा वैशाखभित्र सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमा पठाइसक्ने बताए ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि हामी शून्यबाटै काम गर्दैछौँ । आफू हिँड्ने बाटो आफैँले बनाउनुपर्नेछ । यस्तै, प्रदेशलाई गतिशील र व्यवस्थित बनाउन कानुन निर्माण पनि चुनौतीको पाटो हो । प्रदेशले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । संघले पनि प्रदेशलाई चाहिने कानुन बनाउन जोड दिनुपर्नेछ । हामीसँग भएका स्रोत र साधनको सदुपयोग गर्दै आर्थिक समृद्धिको योजना अघि बढाउनुपर्नेछ । तर, संघले प्रदेशलाई पठाएको बजेटको अंक निकै सानो छ । प्रदेशका आफ्नै संरचनाहरू नहुँदा, पाएको बजेट पनि खर्च गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने अवस्था पनि छ ।
-मुख्यमन्त्री आफैँले समस्या देखाउँदै हिँडेर हुँदैन । महादेव आफैँ लम्पसार परे के हुन्छ ? कर्मचारी प्रशासनको विषयमा मुख्यमन्त्रीले संघसँग समन्वय गर्नुपर्छ । समाधान खोज्नुपर्छ ।